Waa kuma 17 jirka Soomaaliga ah ee doonaya in laga doorto Edmonton, Canada? | HalQaran.com
Home Warar Cusub Waa kuma 17 jirka Soomaaliga ah ee doonaya in laga doorto Edmonton,...
Waa kuma 17 jirka Soomaaliga ah ee doonaya in laga doorto Edmonton, Canada?
Haaruun Jibriil Cali oo u tartamaya golaha deegaanka Edmonton / HARUUN J. ALI
Edmonton (Halqaran.com) – Haaruun Jibriil Cali oo ah 17 jir ku dhashay dalka Canada, ayaa u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee bisha October ee sanadkan ka dhici doonta magaalada Edmonton, gaar ahaan Ward 8 ama Papastew.
Haaruun oo bisha April ee soo socota noqon doona 18 jir ayaa sheegay in dadka madow ee magaaladaas aanay haysan metalaad siyaasadeed.
Sharciga doorashooyinka ee gobolka Alberta ayaa dhigaya in musharrax tartamaya uu yahay 18 jir ka hor inta uusan dhammaan waqtiga isa soo sharrixidda, kaasoo hadda ku eg 20-ka September 2021.
“Mudadii 116 sano ahayd ee uu jiray golaha deegaanka Edmonton, ma jirin hal qof oo madow ah oo loo doortay inuu ka mid noqdo golahan, marka waxaan doonayaa in dadka madow ay metalaad ku yeeshan aqalka looga arimiyo magaaladan,” ayuu sheegay Haaruun oo u warramay BBC Soomaali.
Jibril Cali oo ah aabaha dhalay Haaruun, madaxna u ah ururka Somali Canadian Cultural Society of Edmonton ayaa sheegay in wiilkiisa uu siyaasadda jeclaa tan iyo yaraantiisii, haddana uu ka tirsan yahay ururka dhalinyarada Liberal ee gobolka Alberta.
Haaruun oo culuunta siyaasadda ka dhigta Jaamacadda Victoria ayaa sheegay in haddii uu ku guulaysto xilka uu u tartamayo uu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinka lagu eedeeyo booliska.
“Waxaan ka shaqeyn doonaa sidii kaamerooyinka jirka lagu xirto aan ugu sameyn lahaa booliska Edmonton, si loola socda hawl-maalmeedkooda oo aanay tacaddiyo u geysan,” ayuu yiri siyaasiga da’da yar.
Dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada ayaa la kulmo dhibaatooyin ay kamid yihiin dilal dhexdooda ah iyo isticmaalka maandooriyaha.
Haaruun ayaa rumaysan in haddii uu ku guulaysto kursiga uu u tartamayo uu waxbadan u qaban doono dhalinyarada, gaar ahaan dhanka shaqooyinka.
“Waxaan doonayaa inaan tababaro iyo isdhaxgel ballaaran u sameeyo dhalinyarada deegaanka aan u tartamayo, gaar ahaan Soomaalida, si ay uga baxaan xaaladda adag ee ay hadda wajahayaan,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Dhalinyarada ayuu sheegay inay yihiin kuwa ugu mudan inay ka qeyb qaataan siyaasadda, maadaama uu rumaysan yahay inay heystaan waqti ay wax badan ku baran karaan, isbedalna ku keeni karaan.
Yoolkiisa ayaa ah inuu mustaqbalka qeyb ka noqdo siyaasadda gobolka Alberta iyo tan heer federaal.
Canada ayaa waxaa sanadihii ku soo badanaya Soomaalida xilalka siyaasadda u tartamaya.
“Haddii aan xilkan ku guulaysto, waxaan noqonayaa qofkii ugu da’da yaraa iyo madowgii ugu horreeyay ee xubin ka noqda golaha deegaanka Edmonton,” ayuu sheegay Haaruun.
Edmonton ayaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada labaad ee ay ugu badan yihiin Soomaalida marka laga soo tago magaalada Toronto. Waxaa sanadihii dambe laga soo sheegayay dilal loo geystay dhalinyaro Soomaali ah.
Wiilka 17 jirka Soomaaliyeed